यी व्यक्ति बन्दैछन् प्राधिक,रणको निर्देशक,बाहिरियो रहस्य,किन फालिए कुलमान? पूरा पढ्नुहोस। – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
यी व्यक्ति बन्दैछन् प्राधिक,रणको निर्देशक,बाहिरियो रहस्य,किन फालिए कुलमान? पूरा पढ्नुहोस।
काठमाण्डौं । व्याप,क जन सम,र्थन भएपनि कुलमान घिसिङलाई सरकारले नेपाल बिद्युत प्राधि,करणको का`र्यकारी निर्दे,शकमा पु`न नियु,क्ति गरेन । प्र,धानमन्त्रीका प्रे`स सल्ला`हकार सूर्य थापाले कुलमान अर्को पल्ट का,र्यकारी निर्दे`शक हुन पुन प्र`तिष्प`र्धाबाट आउनु पर्ने बताइ सकेका छन् । उज्या`लो अ`भियानका अगु`वा भनेर चिनि`एका कुलमानकै पा`लामा नेपाल लोडसे`डिंग मु`क्त भएपछि उनी लो`कप्रि`य भएका थिए ।
कुलमानले जस सबै आफैं लिएको भन्दै प्र`धानमन्त्री खु`शी नभए`को समा`चार श्रो`तले बताएको छ । प्र`धानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिते`न्द्रदेव शाक्यलाई का`र्यकारी निर्दे`शन बनाउनका लागि घिसिङलाई पुर्न`नियु`क्ति नगरेको अहिले च`र्चा च,ल्न थालेको छ ।
कुलमानको रि`क्त प`दमा प्रा`धिकर`णकै १२ त`हका रहेका शाक्यलाई ल्याउने त`यारी भइरहेको प्रधा`नमन्त्री का`र्यालयबाट सू`चना बाहिर आएको छ । शा`क्य अहिले नेपाल वि`द्युत प्रा`धिक`रण इन्जिनिय`रिङ क`म्पनीका प्रब`न्ध सञ्चा`लनमा रहेका छन् । उनलाई उ`क्त क`म्पनीबाट ता`नेर का`र्यकारी निर्दे`शक बनाउन लागिएको हो ।
प्राधि`कर`णमा १२ त`हमा का`र्यरत उपका´र्यका´री निर्देशक हिते`न्द्रदेव शाक्य सहित लेखनाथ कोईराला र हर`राज न्यौपाने छन् । कोइराला अ`र्थको प्र´मुख हुन भने न्यौपाने ग्रा`हक तथा वित`रण सेवा केन्द्रको प्र´मुख हुन् ।
कोइराला र न्यौपानेमध्ये एकलाई का`र्यकारी निर्देशक नब`नाएर शाक्यलाई बनाउन लागिएको हो । शाक्यले राधा ज्ञवाली ऊ`र्जा मन्त्री हुँदा चि´लिमेबाट कुलमा´नलाइ हटा`उन म`न्त्रीलाई सहयो´ग गरेका थिए । त्यसबेला मन्त्री ज्ञवालीले नेपाल विद्युत प्राधि`करणको सञ्चा´लक समि`तिमा ल्याएर शाक्यलाई मध्यभो`टेकोशी जलवि`द्युत आयो`जनाको अध्य`क्ष बनाएकी थिइन् ।
नेपाल वि`द्युत प्राधिक`रण आइतबारदेखि नेतृ`त्वबि`हीन छ । कुलमान घिसिङको का`र्यकाल आइतबारबाट सकिएपछि उनको ठाँउमा शाक्यलाई ल्या`उन लागिएको हो । का`र्यका,ल सकिएपनि कुलमानलाई पु`न नियु´क्ति गर्नु पर्ने बिषयमा आ`वाज उठदै आएको छ ।
कुलमानले दै`निक १८ घण्टासम्म हुँदै आएको लोडसे,डिङलाई अ`त्य गरेर सवैको स्या`बासी पाएका थिए । उनको प`हलमा २०७३ को तिहारको ल,क्ष्मीपूजाका दिनबाट परीक्ष`णका रूपमा काठमाडौं उपत्यका ल,गायत मु,लुकका प्र`मुख शहरलाई लो`डसेडि,ङमु,क्त हुन पुगेको थियो । उनले गरेका सुधा`रका प्र,यासलाई भने सवैले प्रसं`शा नै गरेका छन् ।
सामा,जिक सञ्जा,लमा कुलमानको प्रसं,शा गरिदै आएको छ । मा,इतीघर सामा`जिक स`ञ्जालमा कुलमानको प्रसं`शा गरिदै आएको छ । कुल`मान पुन नियु`क्ति गर्नु पर्छ भन्दै कला`कारहरुले पनि द`वाव दिँदै आएका छन् । माइ`तीघरमा समेत कु`लमा`नको प`क्षमा प्रर्द`शन भएको थियो । ताजा खबर बाट
Previous हिमाल चड्ने र घुम्ने इच्छाले नेपाल आइपुगे बहराइनका राजकुमार…हेर्नुहोस् ।
Next सिकिस्त श्रीमान सहित टेन्टभित्र २ महिने दुधे बालक बोकेकी सुत्केरी बिचल्लीमा, सहयोग लिएर पवित्रा लामा (हेर्नुहोस भिडियो)